Gudoomiyaha Xiriirka Shatranjiga Soomaaliya oo gaaray Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha Xiriirka Shatranjiga Soomaaliya oo gaaray Sweden
A warsame 7 August 2014
Mareeg.com: Gudoomiye ku-xigeenka Gudiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS ahna gudoomiyaha Xiriirka shataranjiga Axmed Cabdi Xasan (Wataac) ayaa gaaray maanta Magaalada Tromso ee dalka Norway,halkaasi oo u ka bilowdey shirweynihii 85-aad ee xiriirada Chess-ka Caalamka.
Gudoomiye Wataac ayaa sheegay in halkaasi si weeyn loogu soo dhoweeyey,isla markaana uu durba bilaabay ka qeybgalka shirarka madaxda Shataranjiga ee halkaasi ku sugan.
“Waxaan metelayaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan Hey’adda sare ee GOS iyo xiriirka Shataranjiga, maalmaha soo socda ayaan u sharaxayaa Madaxda aan la kulmo, dhaq-dhaqaaqa aanu ku dooneyno inaan Sportiga dalkeena ku gaarsiino meel sare,gaar aha ciyaarta Shataranjiga oo caalamka si weeyn looga ciyaaro” ayuu yiri Wataac.
“Waxaa halkaan ka socda tartankii 41-aad ee Chess Olympiad,iyadoo sidoo kalena la guda-gali doono shirarka looga hadlaayo sidii talaabo kale oo horu-marineed loo gaarsiin lahaa ciyaarta shataranjiga Chess-ka” ayuu sidoo kale yiri Wataac.
Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in Congresska 85-aad ee Chess-ka uu halkaasi ka bilaaban doono kaasi oo socon doona ilaa 14-ka bishan, laguna dooran doono gudigii hogaamin lahaa,Xiriirka Chess-ka aduunka mudada 4-ta sano ee soo socota.
Ximan & Xeeb si rasmi ah u saxiixday dhismaha maamulka Gobollada Dhexe